बुधबारसम्म सरकार विस्तारको तयारी - Himalayan Kangaroo
बुधबारसम्म सरकार विस्तारको तयारी
Posted by Himalayan Kangaroo | ३ श्रावण २०७४, मंगलवार ०१:२३ |
काठमाडौं । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकार विस्तारमा ढिलाइ नगर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । मन्त्री सिफारिसका लागि बनेको दुईदलीय कार्यदलबीच एक–दुई दिनभित्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोमबार बिहान कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भेटेपछि बेलुका दुईदलीय कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । सोही बैठकले टुंगो लाग्न बाँकी मन्त्रालयमा दलीय भागबन्डा मंगलबार नै मिलाएर बुधबारसम्म सरकार विस्तार गर्नेमा सहमति जनाएको नेता लेखकको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मंगलबार बिहानैबाट कार्यदल बैठक बस्ने र दिउँसोसम्म मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नेछन् । त्यसपछि दलका भागमा परेका मन्त्रालयमा पार्टीहरूले मन्त्री टुंगो लगाउनेछन् । कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन सम्मिलित कार्यदलको बैठक सोमबार बेलुका झन्डै दुई घन्टा चलेको थियो ।
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि ढिलोमा बुधबार सरकार विस्तार हुने बताइन् । ‘हाम्रो दलमा समस्या छैन । अब कांग्रेसभित्रको समस्या मिलेपछि दुई दिनमा विस्तार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सके मंगलबार नै नभए अब ढिलोमा बुधबार सरकार विस्तार गर्छौं ।’
कांग्रेसभित्रै मिल्न गाह्रो
प्रधानमन्त्री देउवासँग १२ मध्येबाट तीन, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई चार, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर पक्षलाई एक–एकजना मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा देउवालाई पार्टीबाटै मन्त्री छान्न सकस छ । पौडेल पक्षले भौतिक पूर्वाधारसहितका प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । तर, देउवाले मन्त्रालयबारे छलफल नै नगरेको भन्दै नेता पौडेलले आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेरै विरोध जनाए । केही नेतालाई पुनः मन्त्री बनाउन दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक कसैलाई पनि नदोहोर्याउने पक्षमा पुगेका छन् ।
प्रचण्डसँग निधिको छलफल
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भेट गरेका छन् । प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि सोमबार बिहान लाजिम्पाटमा भएको भेटमा दुई दिनभित्रै सरकार विस्तार गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसहितका विषयमा छलफल भएको हो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी कांग्रेस नेता निधिले दिए ।
राप्रपा र फोरम तत्काल सहभागी नहुने
राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरम तत्काल सरकारमा सहभागी हुने अवस्था छैन । राप्रपा फुटको सँघारमा पुगेको र फोरम स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । यस्तोमा कांग्रेसले १२ र माओवादीले आठ मन्त्रालय लिने भएका छन् । राप्रपालाई दिने मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहनेछन् । राप्रपालाई चार र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई तीनवटा मन्त्रालय दिने तयारी सत्तारुढ दुई दलको छ । लोकतान्त्रिक फोरम सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सात मन्त्री चयन गरे पनि अझै २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । टुंगो लाग्न बाँकी मन्त्रालयमा सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार, वन कांग्रेसले लिने र ऊर्जा, स्वास्थ्य माओवादीले लिनेमा करिब–करिब टुंगो लागेको छ ।
Previousन्यायाधीश अमेरिका जाने भएपछि भरतपुरको मुद्दा फेरि सर्यो
Next३५ वर्षको उमेरमा १८ औं पटक सुत्केरी !
संसदबाट चुनाव सम्बन्धी दुई वटा विधेयक पारित
१२ माघ २०७३, बुधबार १४:५७
दोस्रो चरणको निर्वाचन : कस्तो छ प्रमुख दलहरूको आँकलन?
महतोलाई किन पटकपटक कर छुट ?
३० आश्विन २०७४, सोमबार ०१:०९
नेपाली सिम सयभन्दा बढी देशमा चल्छ
१३ पुष २०७३, बुधबार ०२:४७